Mudo intee le'eg ayaa feylka qaabka noolaanaya? - Geofumadas
Juunyo, 2008 ArcGIS-ESRI
Muddo daqiiqad ah waxaan u maleynayey in qaabka axfigu uu ahaa bedelka faylka ESRI; laakiin waxay u dhaqantaa sida geodatabase-yada ArcPad, taas oo tusinaysa in ESRI ay ku adkeysanayso inaynu ku xanuunsano qaabka shp.
liitaan format SHP waa ay da, in uu kaydiyo xogta aad foomka tabular sida uu ahaa sano ku dhawaad ​​20 aan awoodin in ay xiriir iyo firdhinta of files yar oo keydin sifooyinka iyo sharciyada xogta dulinka kala duwan.
ESRI ayaa ku dhawaaqay ay axf sida format ah si loogu isticmaalo ArcPad in ka version 7.1 xamili karo miisaska la xiriira halka aad ka mid noqon kara sifooyinka, theming, design iyo qaababka kale in dinorex yar ma uu samayn karin.
In kasta oo qaarkood ay ku qaylinayeen cirka iyagoo leh "Ma u baahanahay qaab kale oo xog deegaan ah?", ESRI ayaa ku adkaysanaya in ayan ahayn qaab cusub laakiin ay la mid tahay sida joodatabase-ku yahay qaab dhismeedka shuruucda xogta ee ku dhisan Microsoft SQL Server Compact Edition Compact Server (SQLCE) ... si loo helo gabagabeyn, isla juqraafi la mid ah oo dad badani ku dhaleeceynayaan in ay yeeshaan API aad u madax adag.
... laga yaabaa inaanay noqon qaab cusub, laakiin wuxuu ku darayaa kakanaanta suuqa suuq geynta, qof waliba waa inuu dhisaa qandaraas kale si uu ula dhaqmo qaabkan.
Oo maxaa laga yeelayaa?
Uruuri faylasha qaabka xogta, sifooyinka muuqaalka qaabka la keydiyay ee dbf... ku jira BLOB (shaybaar badan oo isku dhafan) oo ku yaal qaabka caadiga ah ee qaabka qaabka ... oo ku dhufo dbf.
Ka dibna miis kale waa metadata sida saadaalinta, calaamadaha, foomamka iyo qoraallada.
Ururinta shaatofilayaasha, lakabaddooda iyo dhammeystiryada kale, ayaa loo tixgelin karaa inay yihiin hal fayl.
I Waxa kale oo lagu daro karaa geodatabase ah, aqbalayaan domains, nooc hoosaad iyo xiriirka ... maleynayaa in xeerarka topological iyo nadaam geoprocessing iyo sidoo.
In dhaqanka, qof la GPS a xerada tegi doonaa, ka dhigi dayactirka a cadastral on map a (aan shapefile fudud) sida haddii aad adiga iyo barnaamijka desktop ka shaqeeya, go'aaminta haddii uu jiro kala-goysyada daacadnimada topological iyo soo diri xogta via GSM in database dhexe ... ma tahay? ... ah, raalli ahow, la ArcPad!
Qaar badan waxay aaminsan yihiin in haddii ESRI ayaa shaaca ka on daafacaayo Dino-shapefile, maalin maalmaha ka mid XML (KML, GML) qaabab cuni doonaa isaga nool ... iyadoo aan loo eegayn kii guursaday in Microsoft.
Post Previous«Previous Khariidadaha Stitch, si ay u soo dejiyaan sawirrada moobilka Google Earth
Post Next Isagoo ka hadlaya sayidyadii hore ...Next »
6 Jawaab ayaa ku socota "Intee in le'eg ayuu qaabka feylka noolaanayaa?"
Owl isagu wuxuu leeyahay:
Melanco .. booqo halkan
Melanco isagu wuxuu leeyahay:
Mahadsan, ma ii sharaxi kartaa sida aan u furi karo faylka .shp oo leh autocad 2010 ayaa mahadnaqaya.
si fiican, waxay u muuqataa sida
Xitaa markaa, qaabka joomatari ee la badbaadiyey ma aha mid la mid ah sida faylka shp? Tani waa kiiska geometry field of geodatabase ah.
mmm, waxaan horay u sameeyey saxitaanka, ku kaydi BLOB
Sidee ayey suurtogal u tahay in ...
«Ku soo ururi faylasha qaabka qaab xog ah, astaamaha faylka qaabku waxay ku kaydsan yihiin dbf ... oo ku garaac dbf.»
Haddii aad isticmaasho xog-ururin si aad uhesho qaabka, sidee ayey suurtogal u tahay in aad sii haysato macluumaadka alfasaymar ee DBF dibadda ah?